Wadahadalo soogalootiga cusub shaqooyin lagu siinayo oo socda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: HENRIK MONTGOMERY
Wadahadalo soogalootiga cusub shaqooyin lagu siinayo oo socda
La daabacay fredag 10 november 2017 kl 10.17
Ururada shaqaalaha iyo kuwa shaqa bixiyayaasha dalkaan ayaa imminka aad ugu dhow in ey gaaraan heshiis soogalootiga cusub u sahlaya in ey suuqa shaqada soo dhexgalaan.
Soojeedintaan ayaa dulucdeedu tahay in soogalootiga cusub iyo dadka mudada dheer shaqa la’aanta dalkaan ku ahaa lagu shaqaaleysiiyo mushaaro hoose oo meesha shaqaaleysiisey ey qofkaas siiso iyo qeyb deeq ah oo mushaarka qofkaas lagu kabayo kaas oo uga imaanaya qofkaas la shaqaaleysiiyey dhanka dawladda.
Mushaarada dadkaasi wadar ahaan qaadan doonaan ayaa u dhexeyn doona 16 000 ilaa iyo 18 000 oo karoon kaas oo ah musharka ugu hooseeya ee dalkaan Sweden laga qaato.
Wadahadalkaan loogu gogolxaarayo arrinkaan ayaa waxaa qeyb ka ah shan urur shaqaale oo xubno ka ah urur weynaha shaqaalaha ee LO iyo ururka shaqalaaha ee isna lagu magacaabo Unionen kuwaas oo wadhadal kula jira shan urur oo ka mid ah ururada shaqa bixiyayaasha dalkaan Sweden.
Ururadaas wadahadalka arrinkaan ka yeeshey ayaa hadda waxay mid walbaa fikradahaas la soo jeediyey dib ugula noqoneysaa ururkeeda si ey ogolaasho ama diidmo soo jeedintaan la xiriira uga soo helaan ururada ey matalaan.
Hesiiska dhankaan ku saabsan oo wali qabyo ah ayaa nuxurka uu xanbaarsan yahay waxaa ka mid ah in habkaas cusub ee suuqa shaqada lagu soo galinayo soogalootiga cusub iyo dadka mudada dheer shaqa la’aanta ahaa uu socdo muddo shan sano ah.
Dadka nidaamkaan cusub haddii la isku raaco ka faa’iideysan doona ayaa waxaa ka mid ah soogalootiga cusub ee heysta sharciga daganaashaha dalkaan Sweden, dhallinyarada da’doodu ka yar tahay 25 jir oo shaqa la’aan ahaa muddo lix bilood ah iyo waliba dadka da’doodu ka weyn tahay 25 jir oo iyaguna dalkaan ku shaqa la’aa ugu yaraan muddo hal sano ah.
Qofkii shaqada noocaan ah lagu meeleeyaa waxaa nidaamkaas cusub lagu shaqaaleysiin doonaa ugu badnaan muddo laba sano ah.
Wasiirka suuqa shaqada dalkaan Sweden Ylva Johansson ayaa sheegtey in dawladda dalkaani ey diyaar u tahay in ey qeybteeda ka qaadato ka dib marka heshiis buuxa ey soojeedintaan ka gaaraan ururada shaqaalaha iyo kuwa shaqa bixiyayaasha dalkaani. Wasiiradda ayaa intaas ku dartey in dawladdu ey kaalin xoog leh ka qaadan doonto sidii dadkaas loogu tababari lahaa xirfado ey suuqa shaqada ku soo dhexgalaan iyo dabcan barashada luqadda Iswiidhishka oo iyaduna dhankaas fure u ah.